युएईमा भारतीयहरूका लागि क्यारियर अवसरहरू र भिसा प्रदान गरियो
यो जानकारी हाम्रो वेबसाइटमा प्रत्यक्ष रूपमा पोस्ट गरिनेछ!
कौशल र योग्यता - अल्पविराम द्वारा विभाजित (प्रबन्धक, बिक्री, ईन्जिनियर)
यो प्रोफाईलमा तपाईका मुख्य शब्दहरू छन्, भर्तीकर्ताहरूले तपाईंलाई कसरी अनलाइन भेट्टाउनेछन्
भारतीयहरुको लागि संयुक्त अरब अमीरात को रोजगार को अवसर
यो संयुक्त अरब अमीरातमा सार्न सुरक्षित छ
संयुक्त अरब अमीरात मा भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसरोंयथार्थमा भन्ने हो भने भारतीय विदेशीहरूको लागि ठूलो सम्झौता हो। युएईको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा बढ्दैछ त्यसैले अन्तहीन रोजगारको अवसरहरू। यदि तपाईं भारतमा हुनुहुन्छ र रोजगारी खोज्दै हुनुहुन्छ भने अरब संसार एक उत्तम विकल्प हो। कल्पना गर्नुहोस् भन्दा भारतमा काम पाउन यो सजिलो छ। अधिकांश व्यक्ति विदेशमा आवेदन दिन लाजमर्दो गर्दछ किनकि रसद र अज्ञातको डरको कारण।
भर्खर, भारतीय सरकार नयाँ रणनीतिहरूको साथ आएको छ मात्र प्रक्रिया गर्न को लागी तर विदेशमा काम गर्दा यसको नागरिकको सुरक्षा कायम गर्न सहयोग। युएईमा कर्मचारीहरूको लागि प्रमुख गन्तव्यहरू मध्ये एक। यो सबै क्षेत्रहरु मा पेशेवरहरु को लागी अवसर को भूमि को रूप मा दुनिया भर मा प्रसिद्ध छ।
बर्षको शुरु भएदेखि नै भारतीयहरूले पहिले सरकारले चलाएको अनलाइन प्लेटफर्ममा दर्ता गर्नु आवश्यक छ तिनीहरू कामको लागि युएई प्रस्थान गर्दछन्। यो गैर- ECR पासपोर्ट धारकहरूलाई लागू हुन्छ जुन रोजगारीको आधारमा यात्रा गर्दैछ। धेरै कम भारतीयहरू युएई भ्रमण वा छुट्टीको लागि जान्छन्, सब भन्दा सजिलो भिसा रोजगारीको लागि हो। युएईमा जान चाहने कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई सरकारले प्रस्थानको वास्तविक समय भन्दा कम्तिमा 24 घण्टा भन्दा पहिले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ। एकमात्र उद्देश्यको हित र हितको रक्षा गर्नु हो विदेशमा काम गर्दा भारतीय नागरिकहरू.
संयुक्त अरब अमीरातमा काम खोज्दै
युएई एक बराबर अवसर नियोक्ता बजार हो। तपाईंले आफ्नो देशको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। वास्तबमा, अरब क्षेत्र भारतीय महाद्वीपसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ यसैले कागजातहरूको सजिलो प्रशोधन यदि तपाईं कामको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने। विश्वभरका नागरिकहरू जस्तै तपाईले उपलब्ध अवसरहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र उपयुक्त अनुप्रयोगहरू बनाउनुपर्नेछ जुन तपाईंको रुचिसँग मेल खान्छ।
यो विश्वका अन्य भागहरू भन्दा भारतमा सजिलो छ किनकि सरकारी पहल महाद्वीप भित्र र बाहिर काम पाउन कुशल र अकुशल नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न। भारतको जनसंख्या विश्व मा सबै भन्दा ठूलो बीच हो। वयस्कहरूको साथ विशाल कार्यबल को भाग बनाउने, यी मध्ये धेरै थोरैमा स्थिर रोजगार छ त्यसैले अविश्वसनीय आय।
निश्चित छ कि तपाई भारतको आर्थिक स्थिति बुझ्नुहुन्छ घरेलू आम्दानी स्तरसँग। यो सरकारलाई गोप्य वा अप्ठ्यारो मान्ने कुरा होइन; भारत सरकार साहसका साथ बाहिर आएको छ युएई जस्ता मुख्य गन्तव्यमा यसको नागरिकहरूलाई विदेशमा काम पाउन सहयोग गर्न। अवश्य पनि यसले उनीहरूको देशको जीडीपी बढावा दिन्छ। यो राष्ट्रिय सरकारको रणनीति हो जसले भारतीयहरूलाई युएइमा काम पाउन सजिलो बनाउँदछ।
विद्यार्थी भिसा प्रशोधन गर्न सजिलो छ भारतबाट युएई सम्म। विद्यार्थी यात्रा सम्बन्धित लागत पनि अपेक्षाकृत कम छ। यो युएईमा तपाइँलाई ठाउँको ग्यारेन्टी गर्दछ। लक्ष्य, यस अवस्थामा, देश मा खुट्टा राख्नु हो। तपाइँ4बर्ष वा केही महिना अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ रोजगार पाउनुहुन्छ। युएईमा उच्च रोजगारी दरको साथ, तपाईं एउटा जागिर गुमाउन सक्नुहुन्न; आकस्मिक वा पेशेवर तपाइँको योग्यता मा निर्भर गर्दछ।
छात्रवृत्ति भनेको तपाइँलाई देश पुग्न मद्दतको लागि एक सल्लाह हो। युएईमा अधिक रोजगारदाताहरूले तपाईंलाई एक अस्थायी कार्य अनुमति अनुमति प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं एक लामो अवधि को लागी रोजगार प्राप्त गर्न को लागी व्यवस्थित गर्नुभयो भने, परमिट बढाइनेछ र स्थायी रहन्छ। युएईमा नागरिकता प्राप्त गर्नु ठूलो उपलब्धी हो, तर तपाईं धैर्य र आफ्नो गतिविधिहरु संग सुसंगत हुनु पर्छ। तपाईंले नेटिभहरूसँग विश्वास प्राप्त गर्नुपर्दछ; अरब संस्कृतिमा भरोसा अत्यावश्यक छ।
भारतीय र अरब संस्कृतिमा समानता छ त्यसैले नेटिभहरू बीच सजीलो अन्तरक्रिया दुबै संस्कृतिहरू हुन्छन्। तपाईंले कुनै पनि प्रकारको काम पाउन धर्मको आधारमा स्थापित सम्बन्धको फाइदा लिनुपर्दछ। तपाईंले गर्नु पर्छ युएईमा रोजगारी खोजी गर्दा खुला विचारधारा राख्नुहोस्। अधिकांश रोजगारदाताहरूले अवलोकन गर्न, मूल्या ,्कन गर्न, र विश्वास र विश्वास स्थापित गर्न खोज्दछन् उनीहरूको खास कर्मचारीको भूमिका निर्धारण गर्नु अघि र कम्पनीको मुख्य रणनीतिहरू साझेदारी गर्नु अघि। यो एक व्यवसाय को सबै पक्षहरु मा लागु हुन्छ।
आफ्नो अभिप्रायको साथ खुला रहनुहोस्, र तपाईं सजिलैसँग एक मित्र वा आफन्तको सहयोगीको नातेदारबाट रेफरल पाउन सक्नुहुन्छ। रोजगार भिसामा युएई सर्दै गाह्रो छैन, तर पहिले, तपाईंले उपयुक्त काम खोज्न काम गर्नु पर्छ। अरब संसारमा जीवन स्तर तपाईं बस्ने को छनौट शहर मा निर्भर गर्दछ।
यद्यपि, तपाईंले काम खोज्नु पहिले पहिले ध्यान दिनु पर्छ, र बाँकीले पछ्याउनेछ।
युएई एक प्रमुख रोजगारदाता हो; जो कोही एक हप्ताको लागि मात्र दुबई जाने अवसर लिनुहोस्। अरब क्षेत्र द्रुत रूपमा विकास भइरहेको छ जसको अर्थ व्यवसाय र रोजगारीको लागि बढी अवसरको रूपमा छ। यदि तपाईंसँग कुनै सीप छ भने, तपाईं दुबईमा ठूलो काम गर्ने अवसरहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। दुबईको ज्याला स्तर पनि प्रभावशाली छ; यस बाहेक, आवास र उपयोगिता बिलहरू विश्वभरिका अन्य प्रमुख देशहरू जत्तिकै उच्च छैनन्। तेल प्रचुरता र अरब संस्कृतिले यो भारतीयहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो स्थान बनाउँछ किनभने दुई संस्कृतिहरू बीच समझदारी छ।
के म रोजगार पाउन सक्छु? - युएईमा भारतीयहरूका लागि क्यारियर अवसरहरू?
दुबई एक कम कुशल कार्यबल छ र यो स्थिति भर्न सधैं सक्षम व्यक्ति खोजिरहेको छ। मूल निवासीहरू तेलको कारण धनी हुन्छन् र तिर्ने कामदारहरूलाई कुनै समस्या हुँदैन जबसम्म उनीहरूको अपेक्षानुसार व्यवसाय चलिरहेको छ। मा काम खोज्नुको साथ मात्र मुद्दा दुबई संस्कृतिको एकीकरण हो। अरब मूल निवासीहरू उनीहरूको विश्वासमा कडा हो र यदि तपाईं अन्यथा व्यवहार गर्नुभयो भने सजिलै अपमान हुन्छ; जब तपाईं तिनीहरूको विश्वास साझा वा अनुमोदन गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले तपाईंले विश्वास अनुसार कार्य गर्न आशा गर्नुहुन्छ। यो उचित हो कि तपाईं उनीहरूको देशमा कम्तिमा कम्तिमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरू रोजगारदाताहरू हुन्।
जबकि यो एक चुनौती हो दुबई मा रोजगार को लागी धेरै मानिसहरु को लागी, सांस्कृतिक मिश्रणको कारण भारतीयहरू राम्रो स्थानमा छन्। यी हरेक धर्मको कट्टर प्रकृतिले सँगै बस्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईं एक भारतीय को रूप मा अरब संग जाने को रूप मा समस्या छैन। भारतीय पनि आफ्नो मूल्यमा कडा छ, जुन अरबका लागि महत्वपूर्ण छ। तिनीहरूसँग भारतीय जस्तो अनुशासनको भावना छ।
यो स्पष्ट कारण हो कि दुई क्षेत्रहरू आपसी सम्बन्धमा छन्। सामाजिक र धार्मिक तत्वहरूको समझले तिनीहरूलाई दिगो मित्र बनाउँछ। यदि तपाईं सीप स्तरको आधारमा समान योग्यताहरूको साथ अन्तर्वार्ताहरूको टोली हुनुभयो भने, तपाईंको मूलको कारणले तपाईंलाई बाँकीमा फाइदा हुन्छएन जबकि यो विभिन्न मोर्चहरु मा आलोचना गर्न सकिन्छ, दुबई रोजगारदाताहरु को एक प्राथमिकता र यो को अधिकार छ।
त्यसैले हो, यदि तपाईं भारतबाट हुनुहुन्छ भने तपाइँ दुबईमा सजिलै संग काम पाउन सक्नुहुनेछ।
म कसरी काम पाउन सक्छु?
अवसरहरू अनन्त छन्, असमानताहरू तपाईंको पक्षमा छन्, तर तपाईंसँग एउटा मात्र कार्य छ, तपाइँको लागि सहि काम खोज्दै। उल्लेख गरिए अनुसार दुबईमा धेरै रोजगारीका अवसरहरू छन् तर हरेक काममा तपाईंको सीप, अनुभव, वा प्राथमिकता फिट हुँदैन। साथै, तपाईंलाई च्यानलहरू जान्नु आवश्यक छ कि दुबईमा त्यस्ता रोजगारहरूको विज्ञापन।
यदि तपाईं आफ्नो योग्यता बारे विशिष्ट हुनुहुन्छ र एक विशेष जागिर चाहानुहुन्छ भने, तपाईं दुबईमा शीर्ष कम्पनीहरूको अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तिनीहरू काममा लिइरहेका छन् भने। तपाईं बोल्ड हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो कौशलताको विज्ञापन गर्न एक चिसो ईमेल पठाउनुहोस्। यो निराशा वा विश्वास रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। जसको मतलब तपाईले प्रयोग गर्नुभयो, तपाईले रोजगारीको अवसर गुमाउन सक्ने छैन जब तपाई सीधा सम्पर्क बनाउँनुहुन्छ। तपाईंको रुचि निर्दिष्ट गर्दै र क्यारियर उद्देश्य दुबईमा रोजगार खोज्ने सजिलो तरीका हो जबकि एक्सपो 2020 आउँदैछ.
दुबई स्थिर इन्टर्नेट जडानको साथ शीर्ष शहरहरू मध्ये एक हो। दुबई र सम्पूर्ण युएईमा प्रविधि स्तर पनि द्रुत गतिमा बढ्दैछ। धेरै जसो कम्पनीहरूले उपभोक्ताहरूलाई रोजगार दिनका लागि डिजिटल प्लेटफार्महरू प्रयोग गरिरहेका छन्। तपाईंको ध्यान केन्द्रित गर्दै अनलाइन प्लेटफर्ममा काम खोज सजीलै एक दुबई आधारित फर्म गर्न सक्छ। डिजिटल प्रविधिको साथ उत्साहले यसलाई रोजगारदातालाई प्रभाव पार्न पनि सजिलो बनाउँदछ। दुबईमा सम्भावित रोजगारदातालाई ईमेल मार्फत वा उनीहरूको वेबसाइटमा च्यानलहरू वा सामाजिक मिडियामा सम्पर्क गर्दा उनीहरूको रोजगार निर्णयलाई प्रभावित गर्दछ। यहाँका अरबहरू टेक्नोलोजीका लागि उत्साहित छन् र तपाईंको क्षमता देखाउनाले उनीहरूको निर्णयहरू ट्रिगर गर्दछ।
को लाभ दुबईमा काम गर्दै
एक भारतीयको रूपमा, यो जीवन परिवर्तन गर्ने अवसर हुनेछ किनभने दुबई मा उच्च आर्थिक स्तर को। जीवनको गुणस्तर पनि भारतको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा उच्च छ, तर लागत कम छ। कर दर अनुकूल छ; उपयोगिता बिलहरू मानकीकृत छन्; इलेक्ट्रोनिक्स र रमाईलो लागत पनि विनियमित छ। दुबईमा ज्याला दर पनि अनुकूल छ विश्वको अधिकांश भागको तुलनामा।
याद गर्नुहोस्, तपाईंसँग एक ठूलो अवसर छ यदि तपाईं भारतमा हुनुहुन्छ। भारत सरकारले पनि चाँडो समर्थन गरिरहेको छ दुबईमा रोजगार भिसा प्रशोधन गर्दै.
दुबईका लागि दुबईको लागि भारतीयs संयुक्त अरब अमीरातमा - "धेरै जानकारीमूलक गाइड"। अब भारतबाट जागिरकर्ताहरूले अब हाम्रो कम्पनीको पुन: सुरुवात अपलोड गर्न सक्दछन्। हाम्रो नौकरी साइट पोर्टल दुबई सिटी कम्पनी भनिन्छ अब संयुक्त अरब अमीरातमा भर्ती गर्दै। यो कुरामा ध्यान दिंदा, हाम्रो दलले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई खाडी क्षेत्रमा रोजगारी खोज्न सहयोग पुर्याएको छ। भारतबाट नयाँ क्यारियर खोज्ने। तपाईं संयुक्त अरब अमीरातमा सपना काम खोज्न हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी दुबई, अबू धाबी र शरजाह शहरहरुमा। सामान्यतया, हाम्रो भर्ती टोलीले भारतीयहरुको लागि दुबईमा केही रोचक कार्यहरू व्यवस्थित गर्दछ। र हाम्रो एचआर सेवाहरू मुख्यतः भारतीय क्यारियर खोज्नेहरूलाई समर्पित छन्। विदेश फर्कनुहोस् हाम्रो फर्मसँग यो अब धेरै सजिलो छ। हाम्रो सेवा नयाँ पेशेवरहरूको लागि निःशुल्क छ। तपाईं तल पुनः सुरुवात अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ संयुक्त अरब अमीरातमा सपना रोजगारी खोज्नुहोस्। सामान्यतया, भारतीयहरू दुबई शहरमा सबैभन्दा ठूलो संभावना छन्।
जब म तपाईंको कम्पनीमा आवेदन दिन्छु मसँग हुन्थ्यो आश्वासन कि रोजगार प्रस्ताव गरीन्छ?। हाम्रो उत्तर हो हो, जब सम्म तपाईं हामीलाई आफ्नो आवेदन पठाउनुहुन्छ। हाम्रो प्रतिनिधिहरु मध्ये एक जानकारी र विवरणको साथ तपाइँलाई फिर्ता जान्छ। केही केसहरू हामीसँग तपाईसँग स्काईप वा व्हाट्सएप मार्फत कुरा गर्न आवश्यक पर्दछ। तर आवेदन पछि तपाई दुबईमा भारतीय व्यक्तिको रूपमा रोजगारीको आशा गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाईं भारतबाट दुबईमा काम उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ?
हो, हाम्रो कम्पनीले भारतीय रोजगार खोजी गर्नेहरूलाई एमिरेट्समा रोजगार पाउन मद्दत गर्दछ। हाम्रो HR प्रबन्धक मध्ये एक सँधै एक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ दुबईमा भारतीयको लागि काम 12th पास साथै भारतीय 10th पास कामदारहरूको लागि दुबई रोजगारहरू। त्यसोभए, सामान्यतया बोल्दै, दुबई शहर कम्पनी संग एक ठूलो सम्भावना छ युएईमा रोजगार खोज्नका लागि। हाम्रो उद्देश्य भारतका श्रमिकहरूलाई अबु धाबी वा दुबईमा प्रवासी कार्यस्थलमध्ये एक बन्न सहयोग गर्नु हो।
एक मात्र नकारात्मक पक्ष हाम्रो टीम सधैं अनुप्रयोग प्रक्रियामा एक कठिन सम्झौताको सामना गरिरहेको छ। यो तपाईको पक्षमा हुनुपर्दछ, र तपाइँ 100% पक्का हुनुपर्दछ तपाइँको रोजगारको लागि आवेदन बनाइएको हो दुबई मा विवरण मा कडा ध्यान संग। हाम्रो टोली जहिले पनि तपाईको एएसपी राख्न र तपाईको उत्तम सम्भावना मजदूरीमा निश्चित रूपमा तपाईको अनुप्रयोगलाई थोरै धक्का दिन प्रयास गर्दछ।
त्यहाँ सधैँ कामका स्तरहरू प्रदान गर्दछ जुन हामीले प्रदान गर्न सक्छौं:
प्रवेश स्तर ( ताजा स्नातक विद्यार्थीहरू ) एक महिना $ 3,000 $ 4,5000 भन्दा कम हुँदैन।
मध्य व्यवस्थापन (3 माथि 10 अनुभव) एक महिना भन्दा कम $ 5,000 भन्दा कम छैन, केही अवस्थाहरू $ 8,000 - $ 11,000 सम्म बोनस बिना एक महिना सम्म।
वरिष्ठ व्यवस्थापनमा 8 भन्दा बढी हुनुपर्दछ दुबई व्यापार मा व्यापार को अनुभव को वर्षहरु, ईन्जिनियरि or वा टोली व्यवस्थापन विशिष्ट अनुभव। यस बिन्दुमा ज्यालाहरू month 10,000 एक महिनामा N 25,000 भन्दा बढी हुन्छन्।
उच्च शिक्षित प्रबन्धकहरू, निर्देशकहरू, CFO, CEO ले अधिक आशा गर्न सक्दछन् month 25,000 एक महिना भन्दा तर यी रोजगार प्रस्तावहरूको लागि कृपया हामीलाई निजीमा सूचित गर्नुहोस्।
जे होस्, यदि तपाई त्यो भन्दा बढि हेर्दै हुनुहुन्छ, र त्यो मजदूरी तपाईको लागि कम गर्ने एक तरीका हो। कृपया हाम्रो कम्पनीको साथ आफ्नो आवेदन बनाउनुहोस् किनभने दुबईमा सबै चीजहरू छन्। त्यसोभए हाम्रो एचआर प्रबन्धकले तपाईंको फाईलहरू हेर्नेछ र तपाईंलाई मजदूरीको साथ बार बढाउन मद्दत गर्दछ।
के मैले संयुक्त अरब अमीरातमा काम खोज्न वीजाको आवश्यक पर्दछ?
होईन, हाम्रो कम्पनीको साथ मुख्य बुँदाहरू मध्ये एक छिटो र सजिलो स्थान परिवर्तन सेवाहरू हो। त्यसोभए, सामान्यतया भन्ने हो भने, हाम्रो कम्पनीसँग तपाइँ भारतमा बस्दा रोजगार रोज्न सक्नुहुन्छ। अधिकजसो दुबईका लागि भारतीयs अनलाइन प्रबन्धन योग्य छन्। त्यसो भए तपाईको उत्तर होईन, हाम्रो कम्पनीले तपाईंलाई संयुक्त अरब एमिरेट्समा रोजगार पाउन मद्दत गर्न सक्छ। हाम्रो एचआर टोलीले दिनदिनै देख्न सक्ने सब भन्दा ठूलो गल्तीको अनुभवको अभाव हो। उदाहरण को लागी, भारतीय मानिस युएई मा भिजिट भिसामा काम खोज्दैछन्। र त्यहाँ दुई प्रतिशत भन्दा कम छ संभावना छ कि यो काम खोज सफल हुन्छ.
त्यसैले, कसरी दुबई मा एक भारतीय को कल सेन्टर मा नौकरी पाउने? खैर, एमिरेट्समा रोजगारको एक मात्र तरीका भनेको सबै चीजहरू क्रमबद्ध गर्नु हो। रोजगारको लागि पहिलो अनुप्रयोग, त्यसपछि रोजगारदाताहरूले भिसा जारी गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि उडान टिक्क बुक गर्न सकिन्छ र कानूनी तरिकामा अमीरातमा आउँदैछ.
दुबई शहर कम्पनीमा एक CV अपलोड गर्नुहोस्
तल क्लिक गर्नुहोस् 100% ग्यारेन्टी हो!
कृपया अरूलाई दुबईमा काम खोज्न सहयोग गर्न पनि
दुबईमा रोजगारहरू - मध्य पूर्व स्थान परिवर्तन Expats को लागी गाइड
संयुक्त अरब अमीरात मा भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसरों, तथ्यको रूपमा, एक ठूलो कुरा हो। यद्यपि, संयुक्त अरब अमीरातमा स्थानान्तरण एक ठूलो छ तर एकै पटक उत्कृष्ट छनौटमा। दुबई सिटी अझै पनि भारतको बिस्तारको लागि उत्कृष्ट स्थान हो। उम्मेद्वारहरूको लागि जागिर खोजको शर्तमा भारतबाट दुबई बाट उत्तम विकल्प हो। तर एकै समयमा जब तपाईं दुबई वा अबू धाबी जाने निर्णय गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। हरेक काम प्रस्ताव प्रस्ताव गर्नु अघि तपाईं सावधानीपूर्वक जाँच गर्नु पर्छ आफ्नो CV पठाउनुहोस्.
सावधानीपूर्वक विचार गर्दा संयुक्त अरब अमीरातको सरकारी पोर्टलहरू विज्ञापन गर्दा कृपया स्क्याम सल्लाहकार वेबसाइटमा जाँच गर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, तपाईले यस अवसरको स्थानको लागि यो पनि नक्कली कार्य गर्नु पर्छ यो नकली विज्ञापन छैन। यसबाहेक, तपाईं ह्यान्ड-अप क्यारियर प्रस्ताव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भारतबाट प्रत्येक एक्सटेट दुबईको कामका लागि राख्न सकिन्छ। जे भए पनि तपाईले सुन्नुभएको छ, यदि तपाईं दुबईको क्यारियरको लागि तपाईंको मार्केटिंग गर्नुहोस्। तपाईले निश्चित रूपमा रोजगारी पत्र प्राप्त गर्ने मौका पाउनुहुनेछ।
अर्को कुञ्जी बिन्दु तपाईले संयुक्त अरब अमीरातमा भारतीयहरूको क्यारियर अवधारणाहरूको बारेमा जान्नुपर्दछ। के निम्नलिखित देशले खालका देशहरूमा निश्चित रूपमा बोर्डमा नयाँ क्यारियर ल्याउँछ? उदाहरणका लागि, एक्सपो 2020 क्यारियर र कतारमा फिफा विश्व कप जीसीसी मा पनि बढ्दो अवसर हो। यसैले लगभग हरेक एक्सटेट आफ्नै मौका पाउनेछ खाडी देशमा जागिर खोज्ने.
कसरी अफगानिस्तान दुबईको लागि भारतीय प्रस्ताव गर्न सकिन्छ?
दुबई सिटी कम्पनीले आफ्ना उम्मेदवारहरूको लागि प्रस्ताव गर्ने राम्रो बुँदाहरू मध्ये एक छिटो प्रतिक्रिया हो। हाम्रो भर्ती टोली, सामान्यतया बोल्दै, हप्ताको भित्रमा रोजगार प्रस्ताव आउँदछ। तर हामीले प्रबन्ध गरेको सब भन्दा लामो समय6महिना समयको समय थियो। यो सबै उम्मेदवारको अनुभवमा निर्भर गर्दछ। यसबाहेक, हाम्रो संगठनलाई सँधै निश्चित हुनु आवश्यक छ कि सबै पक्षहरू र आवश्यकताहरू ग्राहकको अनुरोधको रूपमा प्रदान गरिन्छ।
हामी मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौं दुबईमा जागिर खोज्नुहोस्। वास्तवमा, हामी भिसा संग सहयोग गर्दैछौं र दुबई भित्र नौकरी प्रस्तावहरू प्राप्त गर्दै सुझावहरू। हाम्रो कम्पनी अमीरातमा नौकरी खोज सेवाहरू स्थानान्तरण प्रदान गर्दछ। त्यसकारण, भारतबाट उम्मेदवारहरू निश्चित रूपमा दुबईमा जान सक्छन्। हामी यहाँ यहाँ गहिरो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात नौकरी बजार को ज्ञान संग महत्वपूर्ण क्यारियर अनुसन्धान को अनुरूप गर्न को लागी हो। उम्मेदवारहरू ठाउँ खोज्ने आधारमा।
त्यो जानकारीले तपाईंलाई समर्थन गर्नेछ संयुक्त अरब अमीरात भित्र संभावित क्यारियर आन्दोलनको लागि। हाम्रो फर्म केवल सेवाहरूमा धेरै लोकप्रिय हुन्छ जुन हामीले भारतीयहरुको लागि दुबईको लागि अद्भुत सेवा प्रदान गरिरहेका छौं।
यो मनमा, हाम्रो WhatsApp मोबाइल फोन भर्ती प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा सहयोग पुर्यायो विशेष गरी भारत बाट नौकरी तलाशने वाला। यसलाई दुबई क्षेत्रमा भारतीय नियन्त्रित अधिकारीहरू अर्को तरिका राख्न। तिनीहरूलाई गहिरो अन्तरदृष्टिले कर-निशुल्क वेतनको काममा जोगाउँछ। यससँग दुबईमा दिमागहरूमा तपाईले मध्य पूर्व क्षेत्रमा जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ।
भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसर संयुक्त अरब अमीरात मा एक्सटेट्स
त्यहाँ धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ भारतीय रोजगार पाउन सक्छन्। दुबई शहर कम्पनी विस्तृत जानकारीको साथ ब्लग लेख्दै। र स्मार्ट तरिका भनेको अन्य साइटहरूसँग जडान गर्नको लागि रोजगार साइट प्रयोग गर्नु हो। साथै, भारतीय प्रवासीहरूको लागि केहि राम्रो तरीकाहरू छन् जस्तै रोजगार समूहहरू र अरूलाई आमन्त्रित गर्ने सम्भावना साथै अन्तरक्रियात्मक दुबई नक्शामा आफ्नै प्रोफाइल थप्ने।
अर्कोतर्फ, तपाईले संयुक्त अरब अमीरातमा भर्ती कम्पनीहरू पनि हेर्नु हुन्छ। संयुक्त अरब अमीरात मा एक उत्कृष्ट छ भर्खरै एक क्यारियरजेट भनिन्छ र कम्पनी जो भारत मा राम्रो तरिकाले एक दानव खाडी को रूप मा जानिन्छ। तिनीहरू साँच्चै तपाईंको CV सँग आवेदन गर्न योग्य छन्। 100,000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरू यहाँ प्रत्येक दिन दर्ता गर्दै छन्, तपाईले पनि त्यो नेतृत्वको पालना गर्नुपर्छ।
जब तपाईं खोजी गर्दै हुनुहुन्छ दुबई र अबू धाबी मा काम। तपाईंले पक्कै पनि हाम्रो मा एक नजर राख्नु पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरूको लागि गाइड। साथै र सधैँ भारतीयहरूलाई सही बाटो जानको लागि तपाईंको क्यारियर अवश्य सुनिश्चित गर्नुहोस्। किनकि अमीरात कुनै सजिलो बजार छैन यदि तपाईसँग एक उचित गाइड र सूचना छैन।
भारतीयको लागि संयुक्त अरब अमीरातका लागि रोजगारी
तपाईंले भारतका व्यक्तिहरूको बारेमा बहुमूल्य सल्लाह पाउनुहुनेछ दुबईमा नौकरी रिक्त पदहरू। उदाहरणका लागि, तपाईंले मध्य पूर्वमा व्यवसायिक शिष्टाचारमा गुप्त जानकारी जान्नुपर्छ। थप रूपमा, तपाईलाई असाधारण आवास जानकारी थाहा पाउनुपर्छ र दुबईमा छिटो काम गर्ने मोबाइलको प्रयोग कसरी गर्ने.
समान टोकन क्षमता र विद्यालयमा तपाईंको बच्चाहरु को लागि उपयोगी जानकारी द्वारा। बैंकिंग टुक्राहरु को जानकारी संग, र जिम र फिटनेस को रूप मा बुनियादी अवकाश सुविधाहरु। केहि साइटहरूमा उपलब्ध गराईएको जानकारी उपयोगी छैन समाचार। तपाईंले मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ सर्वश्रेष्ठ दुबई नौकरिहरु को लागि वेबसाइट.
वास्तवमा, हाम्रो कम्पनीमा प्रयोग गर्ने उत्तम तरिका हो भर्ती सेवाहरू र अन्य कम्पनीहरूले यस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दैनन्। यसबाहेक, दुबई सिटी कम्पनीले 60 दिनलाई भुक्तान गरिएको नौकरी खोजीमा कुनै सेवामा बनाउँछ। अर्को शब्दमा हाम्रो कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्न मद्दत गर्दछ भारतको क्यारियर खोज्ने भारतीय सेवाका लागि दुबईमा हाम्रा सेयरहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा।
संयुक्त अरब अमीरातमा भारतीयहरुको लागि करियर अवसरहरु मा एक नजर राख्नुहोस्
संयुक्त अरब अमीरातलाई पुनः सम्पर्क गर्दै दुबई सिटी कम्पनीसँग। अधिक अचम्म र राम्रो भयो मध्य पूर्व स्थानांतरण गाइड तपाईं हाम्रो दुबई ब्लगमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
त्यो पिछले वर्ष मा एक उदाहरण को रूप मा भन्न को लागी छ संयुक्त अरब अमीरात रोजगार बजार धेरै पश्चिमी प्रोफेसरहरुको लागि एक जीवंत र समसोनिधि गन्तव्य मा एक विदेशी डाकघर देखि बदल दिए छ। अर्को तरिका राख्न, यूएई सात इमिरेट, अबू धाबी, दुबई, अजमान, फुजुराह, रस अल-खामाह, शरजाह र उम्म अल क्वायणबाट बनाइएको छ। अबू धाबी र दुई मुख्य व्यवसाय केन्द्र दुबई प्रस्ताव शानदार जीवन शैली र उत्कृष्ट क्यामेरा अवसरहरू.
यस अभिप्रायले, संयुक्त अरब अमीरात एक विश्वव्यापी, पहिलो विश्व हो राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्व को एक लामो इतिहास संग देश भारतीयको लागि। आशामा कि यसले ठूलो, उच्च शिक्षित, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक कार्यबलको गर्व गर्दछ भारतका कुशल पेशेवरहरू, क्षेत्र र अन्य वित्तीय केन्द्रहरु को बीच उत्कृष्ट संचार लिंक संग। सबैभन्दा सम्भावना प्रमाण दुबईमा भारतीय 30 भन्दा बढी वर्षको प्रविधि हो जुन महत्वाकांक्षी व्यवसायिक परियोजनाहरू प्रविधि, व्यापार, खेल, यात्रा, र सुरक्षा पर्यटन.
किन दुबईमा जानुहोस्?
सकारात्मक पक्षमा संयुक्त अरब अमीरात मा भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसरों एक छ ब्यावसायमा गैर नोकरशाही दृष्टिकोण, केहि उत्तम कर र अन्य वित्तीय प्रोत्साहनको साथ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा। यो पनि याद राख्नु पर्छ कि दुबई शहरसँग उच्च-स्तरको क्यारियर अवसरहरू छन्। र सबै भन्दा राम्रो भारतीयहरुको लागि क्यारियर सिकाउने.
भारतीयों को लागि सुरक्षित जीवनशैली को इंगित गर्न को लागि यो व्यवसायी अधिकारियों र उनके परिवारों को खोज गर्न को लागि लोकप्रिय स्थान बनाइन्छ। अधिकांश भारतीय निर्वासित पदोन्नति छिटो हो। त्यसैले, यो दुबईमा सार्न लायक छ।
अर्को मुख्य बुँदा: युएई भित्र तपाईले भारतबाट भेट्नुहुने मानिसहरूमा वास्तविक विविधता अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। ती अवस्थाहरूमा, केवल 11% बासिन्दाहरू नागरिकहरू हुन्, लगभग 21% अरब हुन् स्थानान्तरणको प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय करियर खोज्ने दुबईलाई। अन्य देशहरूबाट, 57% दक्षिण एशियाईहरू र बाँकी 11% पूर्वी एशियाली र पश्चिमीहरू हुन्। संस्कृति, भाषा र धर्महरूको एक वास्तविक मिश्रण उपस्थित छन् विभिन्न प्रकारका देशहरूबाट सबै स्तरहरूमा कौशल खालहरू भरेर।
यस कारणको लागि, हामी तपाईंलाई बाटो देखाउने प्रयास गर्दै छौं nउनी दुबईमा काम गर्छन्। एक्सटेट्सको लागि हाम्रो सल्लाहको नकारात्मक पक्षमा, दुबईमा कार्य खोज एक धेरै लामो प्रक्रिया हो। तर सम्झने पहिलो कुरा हामी तपाईंलाई सजिलो बनाउन प्रयास गर्नेछौं। त्यसोभए सबैभन्दा अधिक सम्भव प्रमाणले तपाईंलाई मद्दत पुर्याउनेछ मोबाइल फोन दुबईमा खाली पदहरू। यो दुबईमा सोशल मिडिया हो।
उदाहरण को लागी, युएईमा भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसर र खाडीमा रोजगारी खोजी। उनीहरूको लागि एक सपना सम्झौता हो। केवल स्पष्ट गर्न इमिरेट्सको राजधानीमा राख्नको लागि उत्तम उपकरण हो WhatsApp समूहहरू खाडी र सम्पूर्ण संयुक्त अरब अमीरातमा
अबू धाबीमा किन जाने छैन?
त्यहाँ केहि बुँदाहरू छन् किन तपाईं अबू धाबीको सट्टा राजधानीमा सर्नु पर्छ। उदाहरणको लागि एमिरेट्सको राजधानीमा सँधै बढ्दै गइरहेको छ, प्रत्येक दिन त्यहाँ नयाँ करारहरू राखिन्छन्। उदाहरणका लागि, लिंक्डिन र फेसबुकले हालै त्यहाँ एक कार्यालय खोलेको छ। अर्कोतर्फ, अबु धाबी एक धेरै राम्रो स्थान हो कार बिक्री प्रबन्धक, ईन्जिनियरहरू र तेल र ग्यास कामदारहरूको लागि। त्यसोभए, सामान्यतया बोल्दै, यो सबै अनुभव र तपाईंको व्यक्तिगत स्थितिमा निर्भर गर्दछ।
अबू धाबी सहर राम्रो स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिको लागि धेरै नै राम्रो छ। एक परिवार र आफ्नै घर संग। किनभने त्यहाँ धेरै घोषणाहरू पार्क र कम आवाजहरू छन्। अबु धाबीमा जहिले पनि नयाँ अवसरहरू हुन्छन्, तर यो शहरले ब्यापारको पक्षमा यसको संरचना र मिनी-सरकार सौदाहरू छन् भनेर सम्झनु पर्छ। हाम्रो कम्पनीले सँधै ठूला शहरहरूलाई सल्लाह दिदैछ किनभने तिनीहरू भविष्यका लागि सी हुन्areers जस्तै सीईओ र CFO क्यारियर अवसरहरू.
संयुक्त अरब अमीरात मा भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसरों
दुबई मा व्यय: प्रभाव को एक व्यक्ति को लागि जो चाहन्छ दुबईमा काम। प्रायः अनदेखी बिन्दु मात्र एक्लै जाँदैछ। निस्सन्देह, यो 6500AED को लागी कार्य-स्तरको जीवन जस्तै धेरै कम स्तरमा बाँच्न सम्भव छ। पहिले नै दुबई मा आउन को लागी यात्रा खर्च उल्लेख छैन। त्यसैले सस्तो जीवनको ज्योतिमा दुबई, तपाईंलाई दुबई क्षेत्रमा भाडा को लागत समावेश गर्न आवश्यक छ बस यात्रा गर्न तपाईंको कामस्थानमा समय। साथै तपाईंको कारको लागि पेट्रोल, कार बीमा र रखरखाव शुल्कको लागि कारको लागि नविकरण शुल्कको साथ।
धेरै राम्रो विकल्प एक क्यारियर सुरू गर्न को लागी अति छिटो छ संयुक्त अरब अमीरात मा मोटर वाहन नौकरी को अवसरों को खोज। यस प्रकारको रोजगारीको साथ, तपाईलाई नि: शुल्क कार प्राप्त गर्न र तपाईंको कार्यस्थलमा ड्राइभ गर्ने मौका पाउनेछ। सकारात्मक पक्षमा, तपाईं केवल पेट्रोल र बीमाको लागि तिर्नु हुनेछ।
निस्सन्देह, भारतीय र अन्य राष्ट्रहरूको बीचमा ठूलो भिन्नता छ। उदाहरणका लागि, फिलिपिनोका कर्मचारीहरू दुबईमा फर्किए। र तिनीहरू पनि यस अद्भुत स्थानमा बस्छन्। तर तीमध्ये अधिकांश भारतीयको रूपमा बाँच्न सक्दैनन्। तिनीहरू धेरै कम वेतन प्राप्त गरिरहेका छन्। र तिनीहरूमध्ये अधिकांशले संयुक्त अरब अमीरातमा राम्रो जागिर र नौकरी खोजी सेवाहरू प्राप्त गर्दैनन्।
हामी संयुक्त अरब अमीरात मा भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसरों संग एक्सटेट्स मा मदद गर्दछौं।
यसको साथ यसको लागत छ दुबईमा बस्ने?
घर बिलहरू पानी, बिजुली, फोनका साथ साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्षम हुन, अवश्य पनि, इन्टरनेट, यसका साथै खाना र खाद्यान्नहरू अतिरिक्त वा समय-समयमा रेस्टुरेन्ट पनि। थप रूपमा, तपाई परिवार / आश्रितहरूसँग जोडी हुन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं दुबईमा हुन चाहानुहुन्छ। तुलनात्मक रूपमा तपाइँको खर्च मा तपाइँ दुबई मा प्रत्येक व्यक्ति को लागी AED 2000 को लागी जोड्नु पर्छ। अन्य देशहरूको लागि विशिष्ट, मानक श्रमिकहरू धेरै सस्तो हुन्छन्। जे होस्, दुबईमा धेरै राम्रो ज्यालाको आधारमा, तपाईंले एक दासीलाई भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ दुबईमा अंशकालिक कार्यहरू केहि स्थानीय बाट दुबई कम्पनीहरु यदि तपाईं आफ्नो घर सफा राख्न चाहनुहुन्छ भने।
संयुक्त अरब अमीरात मा भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसरों प्रवासीहरूका लागि नयाँ विकल्पहरू बन्नुहोस्। त्यसोभए के पनि फरक पार्दैन कि तपाई हाल कस्तो स्थिति लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। दुबई शहर कम्पनी तपाईको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्न कडा मेहनत गरिरहेको छ। यसबाहेक, हामी एशियाई क्यारियर शिकारीहरूको लागि हाम्रो ब्लग प्रबन्ध गर्दैछौं जहाँ नयाँ उम्मेद्वारहरूले दुबई र अबु धाबीको लागि भाडामा लिने प्रक्रियाको बारेमा धेरै मूल्यवान जानकारी फेला पार्न सक्छन्।
क्यारियर लागि अवसर भारतीय युएईमा
दुबईको लागि भारतीयहरुको लागि आवश्यकता को पहिचान गर्नुहोस्!
यद्यपि यो हाम्रो सत्य हुन सक्छ दुबईमा कम्पनी दर्शाउन एक महिलाको लागि संयुक्त अरब अमीरातमा सबैभन्दा राम्रो भर्ती रणनीति। उही, हामी दुबई शहर मा स्थिति को संख्या को आधारभूत प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै छौं। र हामी सँधै साथ काम गरिरहेका छौं दुबई मा शिक्षण रोजगार र IT दुबईमा काम। त्यसो भए हामी तपाईलाई दुबईमा जागिरको अवसर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ हामी तपाईंलाई आवश्यक नियोक्ता प्रोफाईलहरूको हेरचाह गर्न आवश्यक छ।
अर्को तर्फ, दुबई शहर कम्पनी सधैं प्रयास गर्दै प्लेसमेन्टको उच्च दर प्राप्त गर्नका लागि दुबईमा जागिरको अवसर। त्यसोभए हामी यसलाई फरक राख्ने प्रयास गर्दै छौं दुबईमा भर्ती र सधैं भारत को अधिकारियों को नयाँ emirates क्यारियर संग खुश राखन।
भर्ती एजेन्टहरु द्वारा क्यारियर अवसरों को पुगन को लागी
अर्को कुञ्जी बिन्दु हो अन्तर्राष्ट्रिय भर्ती एजेन्सीहरूको मुल्यका लागि तिनीहरू सधैँ दुबईमा क्यारियर चाहनेहरूसँग साझेदारी आवश्यक आवश्यकता राख्दछन्। अर्कोतर्फ, दुबई सिटी साधारण कामहरू प्रदान गर्न सट्टा कम्पनीको सट्टा। सधैं काम गर्ने शिकारीहरूलाई वर्तमान समय सम्म हेडहेन्टर, भर्ती एजेन्सी, र मानव संसाधन भर्ती प्रबन्धक जस्ता व्यक्तिहरूको प्रासंगिक सेट संग जोड्न।
यसबाहेक, धेरै गाह्रो कुनै घटना स्पष्ट रूपमा हामी उनीहरूलाई पाकिस्तानबाट समेत एकाधिक स्रोतबाट प्राप्त गर्दैछौं। त्यसो भए पहिलो स्थानमा तपाईं पुग्नु पर्छ सबै भन्दा राम्रो दुबईमा भर्ती एजेन्टहरू, त्यसो गर्न, निस्सन्देह, Google यसलाई दुबईको क्यारियरको लागि र प्रयास गर्नुहोस् दुबई र अबू धाबीमा शीर्ष भर्तीहरू फेला पार्नुहोस्.
तथ्याङ्कको रूपमा, अयोग्य भर्ती एजेन्टहरु सधैं जगेडाका लागि Google मा हुनेछन्। थप रूपमा तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय खोजी गर्न सक्नुहुन्छ भर्ती एजेन्सीहरु मा मुम्बई, या हैदराबाद को स्थानीय हेडहेंटर्स जो संयुक्त अरब अमीरात एजेंसियों को समान समान हुन सक्छ दुबईमा अनलाइन जागिर। दुबई क्यारियर एजेन्टहरूले भारत र पक्कै अनुभवी उम्मेदवारहरू खोज्न र त्यसपछि एकाउन्टका लागि उदाहरणको लागि राख्ने व्यक्तिहरूलाई भेट्न माहिर हुन्छन् दुबईमा वा कुनै अन्य कामहरू emirates jobs.
चाँडै वा पछि तपाईं संयुक्त अरब अमीरात मा एक नौकरी खोजकर्ताको रूपमा। निश्चित रूपमा एक को लागि लडाई संग चिकनी हुनेछ क्यारियर अमीरातमा बिभिन्न प्रोफाइलहरूको साथ। उदाहरण को लागी, दुबई मा होटल को रोजगार एक राम्रो तरीका हो। वर्तमान समयमा तपाईले पनि लड्नै पर्छ दुबई मा सुरक्षा रोजगार लिंक्डइनमा हाम्रो कम्पनीसँग साझेदारी गरिएको। र लामो दौडमा दुबईमा चालक काम किनभने तिनीहरू प्राप्त गर्न सजिलो छ। त्यसपछि सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई स्क्रिन गर्नुहोस् र बल्क साक्षात्कारहरू सेट गर्नुहोस्। दुबई नौकरी भर्ती संयुक्त अरब अमीरातका ब्यवस्थापकहरू जहिले पनि भारतबाट नयाँ व्यक्ति खोज्दछन्। स्पष्ट रूपमा योगको रूपमा र तिनीहरू दुबईमा र सँधै पाउन सजिलो हुन्छ असाधारण ज्यालाका लागि कडा परिश्रम गर्न तयार छ.
ठीक छ, शुरू गर्न को लागी, तपाईं भारतबाट हुनुहुन्छ र एशियाका अधिकांश निर्यातहरू व्यवस्थित छन्। फलस्वरूप कम छोटो बुद्धिमानी, विस्तारित प्रतिभाशाली, र तुलनात्मक रूपमा अन्य उद्यमीहरूमा विस्तृत रूपमा विस्तार-आधारित। हामी धेरै हासिल गर्दछौं नियुक्ति भारतबाट दुबई लाई। वास्तवमा हाम्रो फर्म यो सधैँ निश्चित छ कि हामी एशिया बाट हाम्रा ग्राहकहरुको लागि भर्ती समन्वय को असाधारण परिणाम प्रदान गर्दछौं। उल्लेखनीय छैन कि हाम्रो लागि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण 60 माथि 90 दिनको समय सीमामा दुबई शहरको स्थानको नाम निर्दिष्ट संख्यामा बन्द छ। वास्तवमा, संयुक्त अरब अमीरातमा हाम्रो कम्पनीले सधैं प्रयास गरिरहेको छ भारत को नौकरी तलाशने वाला र मुहैया करे केवल दुबईमा भर्खरैका रोजगारीका लागि।
किन अफगानिस्तान दुबईको लागि भारतीयको लागि धेरै लोकप्रिय छ?
क्यारियर सुरू गर्नुहोस् र संयुक्त अरब अमीरातमा ठूलो सफलता पाउनुहोस्
दुबई भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार खोज्नेहरू हो युएईमा रोजगारका लागि सारांशमा क्यारियरमा बदला लिने शीर्ष समृद्ध स्थानको रूपमा। यस कारणका लागि हरेक महिना धेरै अधिकारीहरू दुबईमा भारतबाट बिक्रीको कामको लागि आउँथ्यो। किनकि यो महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि पैसाको स्थानले तपाईंलाई संयुक्त अरब अमीरातमा पैसा बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
ती परिस्थितिहरूमा, दुबई संसारको सबैभन्दा महान् र धनी शहर मध्ये एक हो। सामान्यतया बोल्ने कामहरू दुबईको लागि भारतीय जहाँ अधिकांश एशियालीहरू लक्जरी जीवन बिताइरहन्छन्। जस्तो उल्लेख गरिएको छ जब तपाईं संयुक्त अरब अमीरात भ्रमण गर्नुभयो देश पनि धनी व्यक्तिहरू भरिएको छ।
एकै समयमा यदि तपाईं जान्नुहुनेछ कि तपाईं कहाँ हिट गर्न दुबईको लागि तालिमको लागि सजिलै संग प्रदान गर्न सकिन्छ। र अन्तमा, तपाईं ठूलो मात्रामा धनी व्यक्तित्वहरूसँग जोड्नुहुनेछ जुन तपाईले मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ दुबई नौकरी खोजी.
चाँडै वा पछि तपाईं एक जना उम्मेद्वार हुनेछ जुन अन्ततः स्थानमा नौकरी पाएको छ तपाईंले लक्जरी जीवन बिताउनु हुनेछ। जब सम्म दुबई शहर को एक ठूलो स्किस्क्रैपर्स मा एक पकड छ। समयको लागी जब एक को लागि भव्य होटल्स सहित एक्सटेट्स रोजगार अवसर। कहिलेकाहिँ आवास पेंट हाउस र संयुक्त अरब अमीरात मा एक उपलब्ध कैरियर को रूप मा शॉपिंग मॉल.
त्यसपछि एक शहरमा क्यारियर र तपाईं सम्भव छ। पृष्ठभूमिमा, यस अचम्मको स्थान पनि संसारमा तपाईंको पत्नीको लागि उत्कृष्ट खरीदारी गन्तव्यहरूको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। तपाईं जान्नुहुनेछ कि जब त्यहाँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र तपाई पैसा कमाउनुहुन्छ। त्यसोभए, केन्द्रको खोजीमा अबू धाबी मा काम र दुबईको जीवनमा आँखा छ र मध्य पूर्वमा उपलब्ध क्यारियर.
संयुक्त अरब अमीरात मा नौकरी को लागि भारतीय र कुनै पनि कामदारहरु को अनुभव?
सबैलाई पहिलो स्थानमा क्या क्यारियर खोज्नु मनमा दुबई छ। वास्तविकताको रूपमा, त्यहाँ अबू धाबी पनि छ जहाँ तपाईं क्यारियर चाहने चाहानुहुन्छ। हरेक भारतीय संयुक्त अरब अमीरात मा ईमानदार एक कैरियर परिवर्तन को लागी लग रहेको छ। त्यसोभए आउँदैन क्यारियर शिकारको लागि संयुक्त अरब अमीरातमा भिषामा भिजिन्छ। वास्तविकता मा, धेरै भारतीयहरु ले भन्यो कि उनि वीजा भ्रमण मा एक नौकरी प्राप्त गर्नेछन्। 7th अमीरात सबै प्रकारका कार्यबल खोज्दै छन्, कुनै पनि अनुभवका कामदारहरु लाई प्रबन्धकहरुलाई।
दुबईमा रोजगारी पाउने सजिलो तरीका भनेको तल्लो तहबाट सुरू गर्नु हो। किनभने व्यवस्थापन रोजगार प्रस्तावहरू यूएईमा त्यति विज्ञापन गरिएको छैन। प्रायः राम्रोसँग चिनिने विज्ञापनहरू छैनन् कि रोजगारले प्रस्ताव गर्दछ। प्रस्ताव र छिटो कुनै पनि अनुभवी व्यक्तिको लागि तरीका भनेको निम्न स्तरीय रोजगारहरू प्राप्त गर्नु हो.
क्यारियरको खोजीको लागि दुबई CITY: जो भारतीयहरु संयुक्त अरब अमीरात मा आ रहे हो। र विशेष गरी मध्य पूर्व मा होटल को नौकरहरु लाई खोज्नुहोस, अमीरात मात्र होइन। कहिलेकाहीँ सबै माथिको भिसा भ्रमण गर्न आउँदैन। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्, हरेक भारतीय नौकरीकर्ताले दुबईमा काम गर्ने भिसामा आफ्नो रोजगारीको प्रस्ताव प्रमाणित गर्न अनिवार्य छ। त्यस आधारमा भारतका मानिसहरू आउँदैछन् आशामा छ कि भिसाको अनुमति भर्ती एजेन्सी द्वारा प्रदान गरिनेछ। एक कुराको लागि, ठीक गर्नुहोस् र देशमा पुग्नु अघि संयुक्त अरब अमीरातमा काम गर्ने भिसा प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अर्को तरिका राख्न, अमीरातमा भारतीय वाणिज्य दूतावासले भनेका छन् कि बढ्दो संख्या बढ्दै गएको छ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय करियर खोजकर्ता र धेरै सामान्य भिसा धोखाधडी योजनाहरू।
दुबई र भिसा को लागि भारतीय को क्यारियर
उदाहरणको लागि, 2018 गोव सल्लाहकारमा भिसा धोखाधडीहरूको उच्च संख्यामा पछ्याउँछ। र सामान्यतया बोल्दै, कल र अन्तिम भ्रमणमा अन्तिम विश्लेषणमा भारतीय व्यक्तिलाई पीडित गर्दछ क्यारियर खोजी। कुनै पनि अवस्थामा, काम गर्ने काम गर्ने एशियाका व्यक्ति कन्सुलरसँग कुरा गर्नु पर्छ। किनकी धेरै अन्य छन् भारतीय कर्मचारीहरू जो नियमित क्यारियर एजेन्सी वा नियोक्ताहरूले नियमित आधारमा फेक गरिएको छ। लामो समयका एशियाका कर्मचारीहरूले नचाहिने काम वा मजदूरीलाई भुक्तानी नगरेको छैन।
वर्तमान समय सम्म, संयुक्त अरब अमीरात संग एक ठूलो समस्या छ भिसाको लागि भिसा। समयिय समय देखि मुम्बई को कैरियर सर्वेहरु लाई अबू धाबी मा धेरै राम्रो बिक्री को काम को वादा गरियो र फिर्ता अचानक केहि केहि नहीं मिलयो। तर पृष्ठभूमिमा आउँदै गरेको क्यारियर खोजीकर्तालाई निर्माण स्थलमा न्यूनतम वेतनका लागि श्रमिकको रुपमा काम गर्न भनिएको थियो र त्यसपछि उनले थपे कि उसले भारतमा धेरै पैसा कमाउनेछ। तपाइँका लागि हाम्रो कार्य समूहहरू पनि सामेल हुन सक्नुहुनेछ दुबईमा पाकिस्तानी कर्मचारीहरू केवल एक स्पष्ट दृष्टि छ। अन्य राष्ट्रहरू क्यारियरका अवसरहरू कसरी प्रबन्ध गर्छन्। तापनि कसरी सऊदी अरबमा कैरियर खोज्न र धेरै अधिक समाचार र सल्लाह को बिट्स।
वर्तमान समय सम्म 2017 को पहिलो छमा, भारत को वाणिज्य दूतावास संयुक्त अरब अमीरात देखि एक रिपोर्ट प्राप्त भयो। भनिन्छ कि अन्तिम विश्लेषणमा भारतीय जनताको कुल 540 श्रमिक शिकायतहरू संयुक्त अरब अमीरातमा हल गरिएको छ र उनीहरुले अबू धाबी वा दुबई शहरमा नौकरी पाएका छन्। सकारात्मक पक्षमा, रिपोर्ट भन्नुभयो संयुक्त अरब अमीरात मा एशिया एक्स्पट कर्मचारीहरु उनीहरु राम्रोसँग भुक्तानी हुँदा धेरै खुसी हुन्छन् बैंकिङ उद्योगको क्यारियर दुबई वा भारतमा.
दुबई सिटीमा सर्वश्रेष्ठ भुक्तान गर्ने कामहरू?
अर्को कुञ्जी बुँदा हामी तपाइँसँग प्रकट गर्न चाहन्छौं दुबई शहरमा र उत्तम भुक्तान गर्ने कामहरू संयुक्त अरब अमीरात मा भारतीयहरुको लागि क्यारियर अवसरों। यस प्रकारको काम प्रख्यात भन्दा बढी छ! CFO र CEO क्यारियर अवसरहरू अझै एशियाई प्रवासीहरूको लागि खुला छन्। त्यसो भए, यदि तपाईसँग उच्च डिग्री स्तरको साथ राम्रो अनुभव र राम्रो शिक्षा रहेको छ।
दुबई सिटी कम्पनी दुबई र अबी धाबी मा मजदुरहरुको लागि समीक्षा 300 नौकरी शीर्षक भन्दा अधिक पुग्छ। यस अवस्थामा, संयुक्त अरब अमीरातको मुख्य उद्योगहरूले नौलो प्राप्त गर्न सर्वोत्तम एक हो। र सामान्यतया बोल्दै, तपाईंले पत्ता लगाउनुहुने कुन क्यारियर सबैभन्दा बढी तिर्नुहुन्छ र नयाँ हुन प्रयास गर्नुहोस् दक्षिण अफ्रीकाबाट सपना उम्मेद्वार। ती परिस्थितिमा, विचारको विचारलाई धेरै चिन्ता छ। जब संयुक्त अरब अमीरात मा एक नया सपना कैरियर को शुरुवात गर्नुहोस।
मुख्य ध्यान जुन तपाईले गर्नु पर्छ ध्यान दिनुहोस् त्यहाँ कम पारिश्रमिक एक काम जीवन सन्तुलन को मामला मा छ कि मैले अधिक अवसरको लागि खोजी गर्न सक्दछु। नकारात्मक पक्षमा मेरो लागि कार्य समायोज्य वा व्यवस्थित गर्न को सार छ ?. के यसले राम्रो क्यारियर बृद्धि अपेक्षाका साथै उत्तम कर-मुक्त आयको लागि संभावना प्रदान गर्दछ? वा यसले मलाई हातमा धेरै पैसा कमाउनेछ? त्यसोभए हेर्नुहोस् संयुक्त अरब अमीरात र खाडीमा भारतीयहरुको लागि करियर अवसर र के छ उत्तम क्यारियर विकल्प.
दुबईमा इन्डियनका लागि रोजगारीका अवसरहरू
पाठ्यक्रमको उत्कृष्ट एक दुबई मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्यारियर
औसत मासिक अद्भुत पेंशन को प्रकाश मा तिर्नुहोस्Dh120,000
वेतन रेंज संग: Dh65,000 देखि Dh145,000
वास्तवमा, मार्केटिंग विशेषज्ञहरूले काम गर्न पनि राम्रो छन्
पेंशन सहित औसत मासिक वेतन को केहि भन्न को लागि: Dh85,000
तुलनात्मक वेतन दायरा: Dh60,000 देखि Dh100,000
तुलनात्मक रूपमा शीर्ष लेखांकन र वित्त पेशेवरहरु संयुक्त अरब अमीरात मा क्यारियर
सँगै अन्य सबै भन्दा राम्रो कामको साथ र समान रूपमा अन्य औसत मासिक भुक्तानी सहित: पेन्सन: DXXUMX
तुलनात्मक वेतन दायरा: Dh55,000 देखि Dh90,000
यसबाहेक वरिष्ठ बैंकरहरू सँगसँगै औसत मासिक वेतन सहित पेंशन सहित: Dh70,000
एक संग ध्यान मा उनि वेतन रेंज हो: Dh53,750 देखि Dh99,500
दुबईमा अचम्मको बोनस भुक्तानी वकील क्यारियर संग युगल
यसबाहेक, एक कठिन परिश्रम को रूप मा संयुक्त अरब अमीरात मा भारतीय को रूप मा र औसत मासिक वेतन पेंशन सहित: Dh67,000
तुलनात्मक वेतन दायरा: Dh60,000 देखि Dh116,000
सुरु गर्न धेरै गाह्रो क्यारियर, तर धेरै अवसरहरू दिँदै
संयुक्त संयुक्त अरब अमीरातमा डाक्टर क्यारियरहरू उल्लेख गर्नुहुन्न
औसत मासिक वेतन पेंशन सहित: Dh70,460
अन्य सँगै शीर्ष-मूल्याङ्कन खाडी कार्यहरू डाक्टर वेतन रेंज: Dh70,000 देखि Dh220,000
वेतन प्रासंगिक विशेषज्ञ न्यूरोलोजिस्ट, बाधाओं र स्त्री रोग विज्ञान को प्रमुख नहीं उल्लेख, बच्चाहरु को मनोचिकित्सक / मनोवैज्ञानिक र वासुलुल सर्जन संग समान रूप देखि।
तपाईं तयार हुनुहुन्छ भारतबाट दुबईबाट?
हाम्रो डाटाबेसमा 600,000 भन्दा बढी नयाँ आवेदकहरू छन्। दुबई मा हरेक दिन नयाँ रोजगारहरु भारतीय भ्रमणहरू हाम्रो वेबसाइटमा प्रवाहित छन्। हाम्रो कम्पनीसँग भारतबाट मात्रै नयाँ आनन्दित अनुयायीहरू र नयाँ रोजगारी खोज्नेहरू छन्। किनकि हामी विश्वास गर्दैछौं कि हरेक व्यक्तिको एउटा हुनु पर्छ विश्वको व्यस्त बजारका लागि प्रमाणित गर्ने मौका.
हामीले दुबईमा विभिन्न किसिमको भर्ती कम्पनी बनायौं। हालको समयमा, हामीले भारतबाट 1,400,000 आगामी भन्दा बढी मद्दत गरेका छौं। जस्तै हामी खुल्ला सेवाहरूका लागि नोट गरिएको छ जब यो तपाइँ सँधै सपिलो हुन्छ, हप्तामा सधैं7दिन। लामो समयान्तरमा, तपाईं बिना भर्ती बिना हाम्रो भर्ती कम्पनीमा हिड्न सक्नुहुन्छ.
एकै समयमा, तपाईं एक संग बाहिर जान सक्नुहुन्छ काम गर्ने काम खोज्नुहोस्। सामान्यतया भारतीयको लागि क्यारियर खोजीको बारेमा कुरा गर्दा हामी के गर्छौं भन्नेमा हामी उत्कृष्ट छौं। निश्चित रूपमा, अन्तिम विश्लेषणमा, हामी संयुक्त अरब एमिरेट्समा तपाईंको उम्मेदवारीको लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छौं। निश्चित रूपमा तपाईं हाम्रो अन्य सदस्यहरूबाट राम्रो मूल्यवान जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सदस्य सेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ र हजारौं प्रवासीहरूसँग जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
भारतीय प्रवासीको रूपमा सीईओ स्थितिमा काम गर्नुहोस्
तपाईंलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै छ भारतीय एक्सप्याट सीईओ अमीरातमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? उदाहरणको लागि, दुबईमा गुगल कार्यहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियर खोजीका लागि उपलब्ध छन्। त्यसैले, संयुक्त रूपमा संयुक्त अरब अमीरातमा भारतीयहरूको लागि नयाँ क्यारियर अवधारणा खुला छ। भारतीय आम्दानीहरू प्राय: अमीरातमा स्वागत गरिन्छ। अनि ठूलो संगठनहरू हरेक दिन भारतबाट नयाँ व्यक्तिहरू भर्ती गर्दैछन्।
एशियाई विदेशियहरुको लागि वरिष्ठ प्रबंधन रिक्त पदहरुको अर्को उदाहरण व्हाट्सएप हो। यस विशेष कम्पनीमा, नयाँ एशियाई कार्यकारीहरूले उच्च स्तरको अनुभवको साथ काम गर्दै छन्, विशेष गरी आईटी विभागमा। यो महसुस गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो कम्पनी पनि व्हाट्सएप मा भर्ती छ। त्यसोभए यदि तपाइँसँग अनुभवको राम्रो समझ छ भने तपाइँ दुबई सिटी कम्पनीमा रोजगार पाउन सक्नुहुन्छ। नकारात्मक पक्षमा, हामी सीईओ वा वरिष्ठ व्यवस्थापन स्थिति प्रदान गर्दैनौं किनकि हामीले व्यापारमा वरिष्ठ व्यवस्थापकहरूलाई पहिल्यै लिइसकेका छौं।
युएईमा भारतीयहरूका लागि क्यारियर अवसरहरू - ती दुबईमा तपाईंको लागि हुन्.
अब एक निष्कर्ष को लागि वास्तव मा अबू धाबी या दुबई मा रोजगारी को खोज को लायक छ ?.
यो यसको मूल्य वास्तवमा दुबईको एक भारतीयको रूपमा नौकरी पाउन लायक छ?
निश्चित रूपमा दुबई, यो टिभीमा मुख्य विज्ञापन हो। त्यहाँ अब छ खाडी क्षेत्रमा आउने धेरै नयाँ परियोजनाहरू। यसबाहेक, साउदी अरेबियाले अब साउदी कम्पनीहरूका लागि काम गर्ने भारतीयहरूका लागि केही प्रतिबन्धहरू गरेको छ। अर्को तर्फ कतार, कहिल्यै 2-3 वर्षको करार भन्दा बढी अरू केही दिदैन्। त्यसोभए, स्मार्ट छनौटको रूपमा हाम्रो कम्पनीले एमिरेट्सलाई सल्लाह दिदैछ। इमिरेट्सको राजधानीमा कर्मचारी नयाँ व्यक्तिहरूमा मात्र धेरै रोजगार पोर्टलमा थप 30,000 भन्दा बढी नयाँ कामहरू छन्।
दुबईमा रोजगार पाउन तपाईलाई विश्वस्त पार्नुपर्ने अर्को जानकारी युएइमा भारतीयहरूको मात्रा हो। दुबई र अबु धाबीमा केहि लाखौं भन्दा बढी दर्ता भएका भारतीय प्रवासीहरू छन्। यो तपाईं आफ्नो निर्णय संग एक बिट आश्वासन दिनु पर्छ। किनभने यदि लाखौं व्यक्तिले युएईमा राम्रो जीवन प्राप्त गर्नुपर्‍यो भने। राम्रो रोजगारीका लागि तपाई आफैंलाई एक मूल्यवान व्यक्ति पनि ठान्नु पर्छ।
दुबई सिटी कम्पनीको साथ तपाई सधैँ निश्चित हुन सक्नुहुनेछ जब तपाइँ हाम्रो सोशल नेटवर्कमा आवेदन गर्नुहुन्छ। तपाईं निश्चित रूपमा राख्नुहुनेछ र संयुक्त अरब अमीरातमा भारतीयहरूको लागि क्यारियर अवधारणाहरू सधैं हाम्रो मानव संसाधन टोली द्वारा उपलब्ध र व्यवस्थित हुनेछ।
जो हरेक भारतीयको लागि निष्कर्ष दुबईमा जागिर खोज्दै
हामी मान्दछौं कि तपाईसँग जानकारीको सबै टुक्राहरू सँगै जानकारीको बारेमा विस्तृत जानकारी दिईएको छ बजार क्यारियर अमीरातमा। त्यसैले, वास्तविकताको रूपमा, तपाईं भारतबाट हुनुहुन्छ र दुबईमा एक नौकरी खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ कि एक भर्ती पुग्ने महसुस गर्नु यो एक सजिलो काम होइन।
सकारात्मक पक्षमा, हामी यहाँ मद्दत गर्न छौं, हामी एक प्रबन्ध गर्दै छौं व्हाट्सएप समूहहरू रोजगारी चाहनेहरूको लागि। भर्ती प्रबन्धक प्रणालीसँग लिङ्कडेइन जडान, दुबई विकल्पमा धेरै अद्वितीय अपलोड पुनः सुरु गर्नुहोस्। यससँगको मनमा भारतबाट संयुक्त अरब अमीरातको क्यारियर खोज्न धेरै सजिलो हुनुपर्दछ।
दुबई सिटी कम्पनी अनुभवको आधारमा। रोजगारको उदाहरणको रूपमा र मध्य पूर्वमा क्यारियर खोज, हामी संग छ दुबई सल्लाह, मूल्याङ्कन, र केहि सल्लाह को बारे मा संयुक्त अरब अमीरात मा नौकरी को खोज गर्न को लागी तपाईं भारत देखि हो।
अर्को तरिका राख्न, हामी भारतबाट प्रत्येक एक्सटेट राख्न प्रयास गर्छौं र संयुक्त अरब अमीरातमा उनीहरूलाई असल कर्मचारी बनाउछौं। सामान्यतया, सँधै खोज्नुहोस् एमबीए संग क्यारियर र तपाईंको खोजीलाई तपाईंको फोन नम्बर वा ल्यापटपमा बचत गर्नुहोस् यदि तपाईंको भविष्यका नियोक्ताले कल गर्न प्रयास गर्नेछ तपाईं एक नौकरी प्रस्ताव संग.
हामी नयाँ भारतीय व्यक्तिलाई उत्तम जीवनशैली र अरबी सपनाको ख्यातिमा हिंड्ने आशा गरिरहेका छौं। हामीसँग मात्र भएको छ आशा छ कि तपाईं हुनेछ!। तपाईको शुभकामना छ र दुबई कम्पनी संग तपाईले आफ्नो आवेदन बनाउनु भएको आशा राख्दछु।